वितेको पाँच वर्ष : फेरियो मालिकाको मुहार
शुक्रवार, बैशाख २३, २०७९ केशरराज क्षेत्री
शुक्रवार, बैशाख २३, २०७९ गंगा खड्का
गुल्मी : कुनैबेला दुर्गमको उपमा पाइरहेको गुल्मीको मालिका गाउँपालिका अहिले सुगमको बाटोमा लम्किदै छ । साविकको गाविसहुँदा र अहिले गाउँपालिका हुँदा विकासको तुलनात्मक अन्तर धेरै माथी छ । साँघुरा बाटा फराकिला भएका छन् । झिसमिसेमै पँधेरोमा पानी लिनजानुपर्ने बाध्यता टरेर घरघरै धारा बनेका छन् । पुस्तौ नफेरिएका चुहिने खरका छाना बदलिएर जस्तापाताले रंगिएका छन् । डोकोमा बोकेर सुत्केरी गराउन जानुपर्ने बाध्यता हटेर अहिले हो र ? भन्ने जस्तो बनेको छ । सवै स्वास्थ्यचौकीमा बर्थिङ्ग सेन्टर बनेका छन् । स्वास्थ्यचौकी गाउँ गाउँ छन् ।
धेरैजसो विकासका पूर्वाधारहरु गाउँमै बनेका छन् । यो सवै सम्भव स्थानीय सरकार स्थापनापछि भएको हो । गाउँबासीले स्थानीय सरकारको अनूभूति पहिलो पटक गर्न पाए । स्थानीय सरकार संचालनको पाँच वर्ष गाउँपालिकाले जनताको मन जितेर काम गरेको नागरिकहरुको प्रतिक्रिया छ ।
शुन्यबाट स्थापना भएको गाउँपालिकाले अहिले देखिने गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेको हो । शुरुका दिनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधी र कर्मचारी बसेर काम गर्ने थलो थिएन् । पानी चुहिने कार्यालयमा बसेर दैनिक सेवाप्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । गाउँपालिका कार्यालय अर्खाबाङ्ग, जहाँ सँधैभरी चिसोले सताउने गर्छ ।
दुई चार दिन तराईको गर्मीले सताएर आएकाहरुलाई अर्खाबाङ्गको चिसो बसौबसौ लाग्ने शितलता हुने गरेपनि दैनिक यही बसेर काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई चिसो समस्याको जड थियो । प्रशासनिक भवन नहुँदा समस्या भोगेको गाउँपालिकाले समस्या, समस्यैका बीचमा पनि कार्यालय निर्माण गरेको छ । तीन तलाको सुविधायूक्त प्रशासनिक भवन भने निर्माणको चरणमा छ ।
जनताको पीडा नजिकबाट बुझेका जनप्रतिनिधीकै कारण मालिकाको अहिले मुहार फेरिएको हो । पाँच वर्षको अवधिमा मालिकाले के ग¥यो ? हामी यसरी चर्चा गरेका छौँ :
आठवटै वडामा निःशुल्क बर्थिङ सेन्टर छन् । सवैमा एम्बुलेन्स छन् । मालिकाले सबै महिलालाई स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै सुरक्षित सुत्केरी गराउन २०७५ सालदेखि अभियान चलाएको छ । ‘गर्भवतीको घरमा हरियो झण्डा, हातहातमा अण्डा’ कार्यक्रम, स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम तथा प्रोत्साहन गरिएको छ । संस्थागत सुत्केरी शतप्रतिशत भएपछि गाउँपालिकालाई शुन्य होम डेलिभरी घोषणा गरिएको हो । यो नेपालकै पहिलो शून्यहोम डेलीभरी घोषणा गाउँपालिका समेत हो ।
किसानलाई गाउँपालिकाले उत्पादनको आधारमा मात्र अनुदान दिने नीति ल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि यो कार्यक्रम लागु भएको छ । यस कार्यक्रमले गाउँपालिकामा रहेका किसानहरुलाई व्यवसायिक रुपमा लाग्न हौसला मिलेको छ । खसीबोकामा प्रति केजी एक सय रुपैयाँ दरले १३० केजी पु¥याउने किसानहरुलाई १३ हजार रुपैयाँ नगद अनुदान दिने गरिएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म ४५ लाख ६० हजार रुपैयाँ अनुदान रकम लगानी भएको छ ।
एक घर एक धारा
गाउँपालिकाका सवै घर घरमा खानेपानीका धारा बनेका छन् । गाउँपालिकाभरी रहेका कुल ३ हजार ७ सय ८१ घरधुरीमा धारा निःशुल्क रुपमा बनेका छन् । यसका लागि ८ करोड बढी बजेट विनियोजन भएको छ । गाउँपालिकाबासीलाई सुरक्षित पानी पिउने व्यवस्थाका लागि उच्च प्राथमिकता दिएर खानेपानीमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । घरमै धारा बनेपछि महिलाहरुको दैनिकी फेरिएको छ ।
गाउँपालिकाको आफ्नै लगानीमा मालिकाको आकाशमा सफल प्याराग्लाइडिङको परिक्षण उडान गरिएको छ । गाउँपालिकाको कार्यालय अर्खावाङको पिसपार्कबाट घमीर, दघाँसहुँदै सिमलटारीसम्म परिक्षण उडान गरिएको छ । यसले समग्र मालिकाको पहिचानमा एउटा थप इट्टा थपिएको छ र समग्र गाउँपालिकाको पर्यटन विकासमा टेवा पुगेको छ ।
मालिकाका सवै वडालाई जोड्ने गरी मदन भण्डारी राजमार्ग, उत्तर दक्षिण रागमार्ग (पुष्पलाल मार्ग) र सालझण्डी ढोरपाटन राजमार्गसँको पहुँच पुग्ने गरी ७७ दशमलव २ किलोटिरको मालिका रिङरोड निर्माण सम्पन्न भएको छ । यस सडक अन्तर्गत अर्खावाङ–मैदान–सिमलटारी–सिलादी–फूलवारी–अर्जै–छापहिले–नेटा–लिलिङ–दुनाम पाटाखर्क–दर्लिग–हवाङ्दी–अर्खावाङ जोडिएका छन् ।
मालिका पिस पार्क
प्राकृतिक हिसावले अति सुन्दर र रमणीय क्षेत्र मालिका गाउँपालिका ४ अर्खावांग देउरालीमा मालिका पिस पार्क निर्माण गरिएको छ । यहाँबाट धौलागिरी, माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण लगाएतका हिमश्रृखलाहरु दृश्वालोकन गर्न सकिन्छ । साथै, पिसपार्कभित्र बालवालिकाहरु रमाउने स्थान, पिकनिक स्थल, मिनी मालिका मन्दिर र शान्तपूर्ण वातावरणमा रम्न सकिन्छ ।
गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन वडा नम्वर ४ स्थित अर्खावाङमा निर्माणधिन अवस्थामा छ । सात करोड ६७ लाख १८ हजार २ सय २४ रुपैयाँ लागतमा तीन तलाको भवन निर्माण हुने छ । बहुवर्षिय योजना अन्तर्गत भवन निर्माणको कामले तिव्रता पाएको छ । २०८० साल भदौ १ गते तीन तलाको भवन निर्माण पुरागर्ने गरी काम अघि बढिरहेको छ ।
गाउँपालिकाभित्रका ७० वर्ष माथीका जेष्ठ नागरिकहरुको सम्मानका लागि गाउँपालिको प्रत्येक वर्ष उहाँहरुको अनुभव र सिकाईलाई सम्मान गरिएको छ । करिब ६ सय बढी जेष्ठ नागरिकहरु सम्मानित हुँदै आएका छन् ।
उद्यमीलाई व्याज अनुदान
साना तथा मझौला उद्यमीहरुलाई मध्यनजर गरी ५० हजार देखि सात लाखसम्मको ऋणमा गाउँपालिकाले पाँच वर्ष अवधिका लागि ब्याँज अनुदान कार्यक्रम संचालन गरेको छ । यसबाट हालसम्म २१ जना उद्यमीहरु प्रत्यक्ष लाभांवित भएका छन् ।
बालविवाहमुक्त गाउँपालिका अभियान
विवाह वारी, २० वर्ष पारी नारा बनाएर गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ देखि तीन वर्षभित्र बालविवाहमूक्त गाउँपालिका घोषणा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
गाउँपालिकाको वडा नम्वर ४ स्थित अर्खाबाङ्गमा हेलिप्याड निर्माण गरिएको छ । हेलिप्याड निर्माणले गाउँबासीहरुका लागि आपत्कालिन उपचार लगाएत सेवामा सहज हुने गाउँबासीले आशा गरेका छन् ।
पूर्ण सरसफाई अभियान
गाउँपालिकालाई स्वच्छ र सुन्दर बनाउनका लागि वडा नम्वर ४, ६ र ८ मा पूर्ण सरसफाई अभियान समुदायस्तरमा संचालन गरिएको छ । यसले सरुवा रोगबाट बच्नका लागि सघाउ पुगेको छ ।
खरको छानामूक्त गाउँपालिका
गाउँपालिकाभरी रहेका १ हजार ५ सय खरका छानाहरु हटाएर जस्तापाता लगाइएको छ । यस कार्यक्रमले पुस्तौदेखि खरका छानामुनी जीवन विताउन बाध्य विपन्न नागरिकहरुलाई राहत मिलेको छ ।
सुरक्षित नागरिक आवाश कार्यक्रम
विपन्न दलिहरुलाई लक्षित गरी वडा नम्वर २ मा ४ वटा, वडा नम्वर ६ मा ६ वटा र वडा नम्वर ७ मा ३ वटा घर निर्माण गरी नागरिकहरुलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
रोजगार तथा स्वरोजगार कार्यक्रम
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न घोरेटा, गोरेटा बाटाहरु निर्माण भएका छन् । सँगै कमजोर आय भएका नागरिकहरुले यस कार्यक्रमबाट रोजगार पाएका छन् । स्थानीय स्तरमा संचालित आयोजनामा उनीहरुको संलग्नता रहेको छ ।
गाउँपालिकाले स्थानीय शान्ति सुरक्षा, निर्णय कार्यान्वयन लगाएत नागरिकहरुको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै ६ जना नगरप्रहरी भर्ना गरेको छ ।
निःशुल्क आँखा शिविर कार्यक्रम
मालिका गाउँपालिकाले निःशुल्क आँखा शिविर संचालन गरेपछि विपन्न नागरिकहरुलाई राहत मिलेको छ । शिविरबाट २ हजार ८ सय ७५ जना सेवाग्राहीले सेवा लिएका छन् । निःशुल्क आँखा अप्रेशन शिविरमा १ सय ८३ जनाले आँखाको उपचार गराई अँध्यारो संसारबाट मूक्ती पाएका छन् ।
पाठेघरको मुखको क्यान्सर शिविर
पाँच वर्षे कार्यकालमा गाउँपालिकाले प्रत्येक वर्ष महिलारोग सम्वन्धी शिविर संचालन गरेको छ । शिविरमा पाठेघरको मुखको क्यान्सरको शंकास्पद विरामीलाई थप उपचारका निम्ती पहल गर्दै आएको छ ।
कोदोलाई मदिरा ब्राण्ड
गाउँपालिकामा अत्यधिक रुपमा उत्पादन हुँदै आइरहेको कोदोलाई मालिका गाउँपालिकाले मदिराको रुपमा ब्राण्ड बनाउने भएको छ । कोदोको मदिरालाई राष्ट्रिय स्तरमै मालिकाको पहिचान झल्किने गरि कोदोको मदिरालाई ब्राण्ड गर्ने नीति ल्याएको हो । यस कार्यक्रमलाई गाउँपालिकाका कोदोखेती गर्ने किसानहरु उत्साहित भएका छन् ।
महिनावारीका लागि सुरक्षित सामग्रीयूक्त विद्यालय घोषणा
मालिका गाउँपालिकालाई महिनावारीका लागि सुरक्षित सामग्रीयूक्त विद्यालय घोषणा गरिएको छ । गाउँपालिकाभरी रहेका निमावी र मावी गरी १६ वटा विद्यालयमा कार्यक्रम पूर्णरुपमा लागु भएपछि गाउँपालिकालाई घोषणा गरिएको हो । गाउँपालिकामा रहेका किशोरीहरु अहिले महिनावारी भएका बेला ढुक्कसँग विद्यालय जाने गर्छन् । महिनावारी भएको बेला पढाई छाडेर घर जानुपर्दैन् ।
भिलेज प्रोफाइल कार्यक्रम अन्तर्गत मालिका गाउँपालिकाले प्रत्येक घरघरमा डिजिटल परिचयपत्र कार्यक्रम लागु गरेको छ । गाउँपालिकाका प्रत्येक घरको अवस्था थाँहा पाउनका लागि परिचयपत्रले सहयोग गर्नेछ । सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा मालिकामा महत्वपूर्ण काम भएका छन् । परिचयपत्रमा सबै प्रकारका तथ्यांक हेर्न सकिने भन्दै प्रत्येक घरको आर्थिक, सामाजिक र पारिवारिक तथा अन्य सबै प्रकारका २ सय ४६ प्रश्नको उत्तर संकलन गरिने छ । यसका लागि करिब ५ लाख बजेट छ ।
दिर्घरोगी स्वास्थ्य सहायता
गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेका दिर्घरोगी जस्तै ः मुटु, मृगौला, जटिल खालका शल्यक्रिया, क्यान्सर लगाएत दिर्घरोगी विरामीहरुलाई आर्थिक र घरमै औषधी पु¥याउने व्यवस्था गाउँपालिको मिलाएको छ ।
अनाथ बालवालिकालाई सहायता
गाउँपालिकाले बेसहारा बालवालिकालाई एसओएस, बालग्राममा ह्वाङ्दीका दुई जना बालवालिकाहरुलाई उद्दारका लागि पहल गरेका छ भने अन्य अनाथ बालवालिकाहरुलाई सहयोग गर्दै आएको छ ।
कोरोना संक्रमितलाई राहत र कोभिड अस्पतालन संचालन
कोरोना महामारीको बेला गाउँपालिकाले कोभिड प्रभावित नागरिकहरुलाई दैनिक उपभोग्यका सामग्री, स्वास्थ्य सामग्री र श्रममा आधारित राहत कार्यक्रम संचालन गरेको थियो । साथै, ५ वेडको अस्थायी कोभिड अस्पताल स्थापना गरी कोरोनाबाट ग्रसित नागरिकहरुको उपचार गरिएको थियो ।
गाउँपालिकाले स्थानीय परिवेशलाई मध्यनजर गरी स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरेको छ । यो कार्यक्रम गाउँपालिकाका ५६ वटा विद्यालयमा लागु भएको छ ।
एमविविएस डाक्टर सहितको सेवा
अर्जै स्वास्थ्यचौकीमा एमविविएस डाक्टर सहितको स्वास्थ्य सेवा २०७८ फागुनदेखि संचालन गरिएको छ । स्वास्थ्यचौकीमा एक्सरे र भिडियो एक्सरे सेवा समेत उपलव्ध गराइएको छ ।
अर्जै स्वास्थ्यचौकी र घमीर स्वास्थ्यचौकीमा प्रयोगशालाको व्यवस्थान गरिएको छ ।
गाउँपालिका अनुदानमा शिक्षक
गाउँपालिकाले कुल ५६ वटा दरवन्दी सृजना गरी शिक्षकहरुको व्यवस्था गरेको छ । दरवन्दी मिलान र विद्यालय समायोजनको कार्यक्रम समेत सम्पन्न गरिएको छ ।
विपन्न परिवारलाई मिटरबक्स र तार
उज्यालो गाउँपालिका कार्यक्रम अन्तर्गत विपन्न नागरिकहरुलाई मिटरबक्स र तार वितरण गरिएको छ । ९६ सेट सोलार सहित मिटरबक्स वितरण गरिएको छ । र अति विपन्न नागरिकहरुका लागि वाइरिङ सेवा पनि मिलाइएको छ ।
कृषि पकेट क्षेत्र कार्यक्रम
अर्जैबेशी फाँटमा धान पकेट क्षेत्र, वडा नम्वर २, ३, ४ र ५ को हिले क्षेत्रमा आलु पकेट क्षेत्र, घमीर र मर्भुङमा मकै पकेट क्षेत्र, नेटामा कोदो पकेट, घमीर र अर्जैमा कफी पकेट क्षेत्र तोकिएको छ ।
गाउँपालिकामा हेल्प डेक्स संचालन
गाउँपालिकाको दैनिक कामकाजलाई सहज बनाउनका लागि गाउँपालिका कार्यालयमा हेल्प डेक्स संचालन गरिएको छ ।
मालिका ६ का बस्ती बस्तीमा फ्रि वाइफाई
मालिका गाउँपालिका वडा नम्वर ६ अर्जेस्थित ५८ वटा गाउँबस्तीमा फ्रि वाइफाईको व्यवस्था मिलाइएको छ । यसले नागरिकहरुलाई सूचनाको सहज पहुँच भएको छ ।
सफ्टवेयर मार्फत राजश्व संकलन
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ राजश्व संकलन सफ्टवेयर मार्फत शुरु गरिएको छ । यसले दैनिक कामकाजलाई सहज बनाएको छ ।
६१ वटा ऐन, कानुन निर्माण
गाउँपालिकाले पाँच वर्षको अवधिमा विभिन्न, ऐन, नियम, कानुन, निर्देशिका र नियमावली गरेर ६१ वटा बनाएको छ ।
सुत्केरीलाई झण्डा र अण्डा
गर्भवती महिलाको घरमा हरियो झण्डा र गाउँपालिकाको तर्फबाट एक क्यारेट अण्डा वितरण गरिएको छ । संस्थागत सुत्केरी हुनेलाई २ हजार आठ सय नगद, न्यानो झोला दिने गरिएको छ । यसले संस्थागत सुत्केरीलाई प्रोत्साहन गरेको छ ।
गर्भवती महिलालाई एम्वुलेन्स खर्च
गर्भवती हुने सवै महिलालाई आउजाउ खर्च निःशुल्क गरिएको छ । तत्कालै रिफर गर्ने सुत्केरीलाई जिल्ला वाहिर र भित्रका लागि जाने खर्च गाउँपालिकाले मिलाउने गरेको छ ।
विपन्न विद्यार्थी सहयोग
चार जना विपन्न विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाई गाउँपालिकाले मिलाएको छ । कक्षा १, २, ७ र ८ कक्षामा पढ्ने बालवालिकालाई समेत सहयोग गरिएको छ ।
माथिल्लो कक्षा पढ्न शिक्षकलाई आर्थिक सहयोग
रेसुंगा बहुमुखी क्याम्पसमा माथिल्लो कक्षा पढ्ने शिक्षकहरुलाई आर्थिक सहयोग गाउँपालिकाले गर्ने गरेको छ ।
महिला स्वास्थ्य स्वयसेविकालाई प्रोत्साहन भत्ता
गाउँपालिकामा रहेका सवै महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविकाहरुलाई मासिक एक हजार प्रोत्साहन भत्ता दिइने गरिएको छ । यस कार्यक्रमले महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविकाहरुलाई प्रोत्साहन मिलेको छ ।
विपन्न विद्यार्थी छात्रवृत्ति कार्यक्रम
गाउँपालिकाले विपन्न विद्यार्थीलाई नगद छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने गरेको छ । विपन्न विद्यार्थीलाई यस कार्यक्रमले थप प्रोत्साहन बनाएको छ ।
दर्लिङ सामुदायिक होमस्टे
वडा नम्वर २ दर्लिङमा स्थानीय कला सँस्कृतिलाई जर्गेना गर्दै स्थानीय मौलिक परिकारको स्वाद लिने गरी सामुदायिक होमस्टे संचालन गरिएको छ । यहाँ २१ वटा पाहुँनाघर तयार छन् ।
सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई स्थापना
गाउँपालिका स्थापनाको पहिलो वर्षमै च्यानडाँडा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई दर्लिङ, छापहिले सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई छाप, कुमालगाउँ सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई अर्जैैमा स्थापना गरी स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा नरहेका नागरिकहरुलाई नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रवार, बैशाख २३, २०७९, ०४:४५:२६
रेसुंगाको मेयर प्रतिस्पर्धी पाण्डे र पन्थी
माण्डवीले फेरी खोज्यो श्रीधर
पैसा पालिकाको, हालीमुहाली हेफरको : कार्यविधि मिचेर पौने अर्ब स्थानीय तहमा बेथिती, बाख्रामा बिचौलिया
बिहिवार, चैत्र १०, २०७८ केशरराज क्षेत्री
बिहिवार, चैत्र १०, २०७८ गंगा खड्का
‘चन्दा नदिएपछि विप्लव समूहले जंगली हर्कत गरे’ कालोमोसो दलेको चौतर्फी विरोध
मंगलवार, फाल्गुन १०, २०७८ आजको पोष्ट